Tag: spf rekodhi | Martech Zone
Tag: spf chinyorwa
Ini ndangotamisa email yekambani yangu kuenda kuGoogle Zvikumbiro. Parizvino, isu tinonyatsoda rusununguko rwuri kutipa. Tisati tave paGoogle, taimbofanirwa kuisa zvikumbiro mukati mekuchinja chero kupi, zvinyorwa zvinowedzerwa, nezvimwe. Iye zvino tava kukwanisa kuzvibata zvese kuburikidza neGoogle yakapusa interface. Imwe mhinganidzo isu takaona, hazvo, yaive yekuti imwe email kubva kune yedu system haisi kunyatso kuzviita kwatiri. Ndakaita kuverenga pamusoro paGoogle